Small Repti-Therm UTH eo ambanin'ny fanaterana tank China Manufacturer
Description:UTH eo ambanin'ny fanamainana tank,Repti-Therm UTH eo ambanin'ny fanamainana tank,UTH eo ambanin'ny Tank Tank Heating Pad
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > Small Repti-Therm UTH eo ambanin&#39;ny fanaterana tank
Ao ambanin'ny fantson-drano izay natao mba hampangatsiahana ny hafanan'ny rivotry ny terrarium anao dia eo ho eo amin'ny dimy ka hatramin'ny 10 degre (F) mahery kokoa noho ny mari-pana. Toeram-pandeham-baravarankely henjana miaraka amin'ny UL / CSA. Vola hany vola fotsiny isan'andro no ampiasaina.
Izany dia natao ho an'ny fantson-drano fanadiovana trondro. Amin'ny alàlan'ny fitaovam-pandam-pahamendrehana avo lenta, dia azo atao ny manara-maso ny angovo automatique, ny fitazonana ny hafanana amin'ny faritra maromaro na dia any amin'ny toetrandro mangatsiaka aza dia manome fiarovana tsara indrindra ho anao sy ny biby fiompinao. Ankoatra izany, ny fananana ny sarimihetsika PET solon-dasy dia mahatonga ny famokarana maharitra sy hentitra. Manolotra ihany koa ny fitaovana fitrandrahana OEM ho an'ny fanamboaran-tsolika.Izao no takianareo, dia afaka manamboatra ny vokatra ilainao izahay. Ny trondro tanky trondro tanky koa dia natao ho an'ny CE, RoHS, Ul, ETL.
UTH eo ambanin'ny fanamainana tank Repti-Therm UTH eo ambanin'ny fanamainana tank UTH eo ambanin'ny Tank Tank Heating Pad Mipetraha eo ambanin'ny fanamainana tanka Mat Teo ambanin'ny fitahirizana ranom-basy Teo ambanin'ny tanka tezitra mba hihazonana hafanana Toeram-pandehan'ny hafanana mipetaka Toeram-pandehan'ny hafanana mavo